Sun Tzu dee akwụkwọ ya «Nkà nke Agha»Laa azụ na narị afọ nke ise BC. Ọtụtụ agha mgbe e mesịrị, na site na narị afọ nke XNUMX ruo taa, a na-arụrịta ụka n'etiti ụlọ ọrụ dị iche iche ma ọ bụ ụlọ ọrụ obodo. Anyị na-atụgharị gaa na nka nke agha n'etiti ụlọ ọrụ nwere akụrụngwa na-emebi emebi na nrọ mmiri nke Genghis Khan n'onwe ya.
Imeri mpi na-ewe ụfọdụ atụmatụ na nnọọ a bit nke otu uto nke ikpochapụ nke dike ìgwè na-etinye n'ime omume nke mere na ọ bụghị nwetụrụ n'ahụ nke onye iro fọdụrụ. Ụlọ ọrụ ndị dị ka ụlọ ọrụ dị ugbu a na-eto eto na okpomọkụ nke ọnọdụ dị iche iche na niche ahịa ha na-agbanwe. Modern capitalism wee pụọ mgbe mmepụta mgbanwe mgbanwe na ajụjụ bụ na bụ na-eri dum achicha na-achọsi ụmụaka ike ihe ọ bụla.
Mana ọ bụkwa eziokwu na iwu kwadoro ime ka a ga-asị na ọ na-edo onwe ya n'okpuru asọmpi. Ọchịchọ na-abịa ọkọlọtọ n'ọnọdụ mmadụ na ime mmụọ ọjọọ ya otú ahụ na-adịghị arụ ọrụ na mmuo mmuo ọkara n'etiti mmetụta uche na uche. Ngwongwo, ihe onwunwe nkeonwe, uru ... akụkụ niile nke otu echiche nke ihe a chọrọ dị ka ihe dị n'ihu aka anyị.
Ajụjụ dị n'akwụkwọ a bụ ịchọpụta usoro ịgba agba agba, egwuregwu poker nkịta na nkịta n'etiti ụdị ama ama nke ruru n'elu ma ọ bụ daa n'ụzọ ziri ezi na mmụba nke ndị ọzọ ... Na ịhụnanya, na agha na azụmahịa. ihe ọ bụla na-aga. Site ọdịda nke Nokia na ekwentị mkpanaaka na strangely dubious coexistence nke Coca Cola na Pepsi, ndị ga-asị na ha nwere ike ịbụ otu ika factionalizing a mpi… Ọ bụ ihe niile a okwu nke insider ọmụma banyere ya.
Na onye dere akwụkwọ a nwere ọtụtụ ihe ahụ. N'ihi na n'ikpeazụ ọ dịghị ihe dị ịrịba ama na-enweghị akụkọ ifo. Ndị na-arị elu nke elu na nnukwu azụmahịa na-amasị Dominguín mgbe ya na Ava Gadner nwere ihe ya. Ee, ha onwe ha kwa na-agba ọsọ ka ha gwa ya, iji gosi na ọ bụ ha kpatara na onye iro ha zọọla n’ala, na-ahapụ ọnụ ahịa ngwaahịa ha ka ihe mkpofu dị ọcha. Ọ nweghị ihe nkeonwe, naanị azụmahịa ...
Nke a bụ otú foto a si dị njọ ma a bịa n'ịmụta ihe ndị dị na ụwa azụmahịa. Mụta inyocha abysses gafere ụkpụrụ ọma, gbanwee ya dị ka ahịa ahịa ahịa ma ọ bụ usoro mmepụta ihe ma were ihe niile nwere ike ịga n'ihu ... Ọ bụ eziokwu na ọrụ ahụ na-eji amamihe eme ihe mgbe ụfọdụ, atụmatụ dị ọcha nwere echiche ọhụụ. Ihe niile bụ ihe na-anọgide na nke ziri ezi.
Ị nwere ike zụta akwụkwọ "The Art of War Between Companies", nke David Brown dere, ebe a:
Tags David Brown, Akwụkwọ akụkọ